Ụbọchị My Pet » Nwere ike Anu ulo Sense Red ọkọlọtọ Mgbe ọ na-abịakwute Mr. Right?
site My Lim
Ọ bụrụ na ị na-ahụ gị furry enyi dị ka ndọtị nke ị, Ohere inweta bụ na ọ bụrụ na gị na nkịta anaghị amasị gị ụbọchị, ị pụrụ adịghị ma. Many believe that during the first visit to your home if your dog growls and retreats from your date, nke ahụ bụ mgbe a mma ịrịba ama. Ohere inweta bụ ọ uche ziri ezi ihe amiss. Oti mkpu na hey gaa na isi gị na ị bụ na elu anya, ma eleghị anya, Mr. Right adịghị mma, ka emechara.
Ma, ọ bụ n'ebe ọ bụla a eziokwu?
Anyị na-ekiri vidio nke nkịta fetching ihe ọ bụla si akwụkwọ akụkọ ka na a ụzọ slippers, jump through loops, and mimicking their owner’s movements. Anyị ghọta ha nwere ma na-ejide elu echiche na niile nkịta na-innately ike nke ndị a na-eju feats. Ee, ha bụ. Mgbe ọtụtụ ọzụzụ na-bụ.
Anyị na-agụ banyere otú Jọdan ezinụlọ nkịta mere aggressively kwupụta ha babysitter, Khan, na ụdi chọpụtara nke mmegbu jidere na teepu. Ma nke a bụ mgbe 5 ọnwa nke ịbụ gburugburu Khan na-ahụkarị ihe ọ na-eme, abụghị ihe ozugbo mmeghachi omume mgbe onye mbụ nzukọ.
Ọtụtụ ndị na-eche ha nkịta nwere ike chọpụta ihe ize ndụ na-adịghị ewe oke obiọma ndị-eyi egwu ezinụlọ ha. Protectiveness bụ n'ihi nke a ọtụtụ narị afọ nke ozuzu, gafere ala site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Anyị na-agụ banyere pooches jumping ịzọpụta ndị nwe ha, mgbe na-achụ àjà ha.
N'akụkụ aka nke ọzọ, ma ọ bụrụ na-ekiri Cesar Millan, ama Dog Whisperer kụziiri m ihe ọ bụla, ọ bụ ya na ndị nwe na-adịghị aghọta ha nkịta asụsụ na ụwa ha dị ka ihe dị ka ha na-atụ anya.
Anyị anyị n'anya anu ulo nke ukwuu nke na anyị na-echefu mgbe ụfọdụ na nwoke enyi kasị mma abụghị mmadụ. Ọ bụ ya bụ nkịta. Site n'ụzọ ziri ezi na-agụ nkịta, o jisiri gbanwee ha, anapụta ndị nwe si yiri agaghị ekwe omume ọnọdụ.
Cesar Millan ede, "Ime ihe ike ị ga nkịta nkụda mmụọ na dominance. The nkịta nkụda mmụọ na-abịa site a enweghị nkịta mmega, na nkịta dominance na-abịa site a enweghị udo-olu ike na-edu ndú. "Ọ pụrụ ịbụ na enweghị ọzụzụ a gbara ume a mmeghachi omume?
A nkịta nchekwa ndu – Nkịta aṅa Ntị site American ulo nkita Club echiche ọzọ ihe mere, ọ pụrụ ịbụ na gị na nkịta "weere ya yad onye onwunwe na ike na-aba mba ma ọ bụ taa iji chebe ya" Nke a pụtara na gị na nkịta mmeghachi omume bụchaghị a mmeghachi omume a kpọmkwem onye, onye ọ bụla na-agafe gị yad hụrụ ka ihe ome tafia.
Behaviorists sit on both sides of the fence on this. Only you can decide if your dog’s datedar is accurate. Ma tupu unu na-atụkwasị Mr. Gaje Ịbụ si ụzọ, ị pụrụ inye ya a ohere iji gosi na ọ bụ Mr. Right.